Loko boloky: Ny fampidirana ny ankizy ny loko eo amin'ny tontolo voajanahary by David E. McAdams, Professor Bouquet |, Paperback | Barnes & Noble® B&N Top 100 NY Times Bestsellers
Amin'ny maha-raibe ho sivy, ny mpanoratra efa namaky boky maro momba ny loko ny ankizikely sy ny ankizy. Ary nahita azy tsindrimandry. Misy be dia be endrika kanto sy ny loko eo amin'izao tontolo izao; sariitatra-toy ny sary tsy afaka hifaninana. Ny mpanoratra nanontany tena hoe: "Inona eto amin'izao tontolo izao manana loko ampy amin'ny Kilonga mba hampianatra madinika?"
Avy eo, dia tafintohina amin'ny "Histoire Naturelle de Perroquets" avy François Levaillant. Raha mbola nahita ny taonjato faha-19 mba ho sarotra frantsay, ny sary, noforonina eo ambany fitarihan'ny Bouquet, Profesora ny Drawing, Prytanée any Paris any amin'ny tany am-boalohany ny 1800, dia mahavariana. Dia nahita ny tonga lafatra fitaovana hampianarana ny ankizy loko anarana na aiza na aiza.
David E. McAdams no rain'ny zaza valo, ary raiben'i ny sivy sy Ny fisiana ara-. Dia tsara manana ny zafikeliny sy tia ny mandany fotoana mamaky azy. Ny tena fialam-boly dia ny matematika, ary izy nanoratra boky ho an'ny ankizy maro mikasika io lohahevitra io. Boloky Loko dia fohy lafiny-dalana ho any amin'ny tontolo mahafinaritra loko voajanahary.